Qasaare Ka Dhashay Isku Dhacyo ka Dhacay Congo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Qasaare Ka Dhashay Isku Dhacyo ka Dhacay Congo
Qasaare Ka Dhashay Isku Dhacyo ka Dhacay Congo
Dhowr qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruur, ayaa ku dhaawacmay iska hor-imaadyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada Bambari ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
War ay soo saareen galinkii dambe ee Isniinta, Dhakhaatiirta aan Xudduudda Lahayn ayaa waxay ku sheegeen in xarun caafimaad ay qabsadeen rasaas iyo walxaha qarxa, xilli ay socdeen isku dhacyo rabshado watay oo ka dhacay Magaalada Bambari Bartamihii Bishaan Febraayo.
Dagaalka u dhexeeya isbahaysiga kooxaha hubaysan ee aan dawliga ahayn iyo ciidamada dawladda ayaa socday labadii bilood ee la soo dhaafay, taas oo Dalka Bartamaha Afrika gelisay xaalad cusub oo rabshado ah.
Bambari, oo ku taal gobolka Ouaka, ayaa waxay ahayd xudunta dagaalka,ee Dalka Bartamaha Afrika.
“Dhibaatada bani’aadamnimo ee xilligan ka jirta Bambari iyo guud ahaan dalka waa mid laga naxo oo rabshadaha saameeyay dadka rayidka ah waa in la joojiyaa,” ayay tiri Marcella Kraay, oo ah ku xigeenka madaxa howlgalka MSF.
Kraay ayaa sheegtay in xiisadaha joogtada ah iyo dagaalada qoto dheer ay saameyn ku yeeshaan durba kuwa ugu nugul, isla markaana ay ku dhacday dal ay sanado badan dagaalo sokeeye ka socdeen.
Ugu yaraan 100,000 ayaa ku barakacay dalka gudihiisa rabshadihii ugu dambeeyay. 107,000 oo kale waxay u qaxeen wadamada deriska la ah ee Cameroon, Chad, iyo DR Congo sida ay sheegtay Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga.
Previous articleMareykanka oo liiska Argagaxisada ku daray saraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Next articlePuntland oo Ciidamo ku daadisay wadooyinka Boosaaso